आलोचना खाँदै आएको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा एका-एक सुधार – NagrikPath
आलोचना खाँदै आएको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा एका-एक सुधार
Nagraikpathadmin February 22, 2019	No Comments
परासी, फागुन १० ।
पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पताल केही समय अलोचनात्मक बनेको थियो । जिल्ला कै अस्पताल बाट सेवाग्राही आवश्यक सेवा नपाउँदा निकै गुनासो बढेको थियो तर अहिले अस्पतालमा एकाएक सुधार आएको छ ।
एम डि.जि.पी एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन पवन अग्रहरप्
५० शैयाको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डाक्टरहरुको अभावमा सेवा नदिन सकेको अवस्था रहेको थियो । जिल्ला कै पुरानो अस्पतालमा सेवाग्राहीहरु ले सेवा लिन नपाँउदा अस्पताल ले आलोचना मात्रै सुन्ने गरेको थियो । अस्पतालमा नेपाल सरकारका दरबन्दि अनुसार ५२ जनाको दरबन्दि रहेको छ । तर जनशक्ति र ईकुपमेन्टको अभावमा अस्पताल सेवा दिन सकेको थिएन । तर ६ महिना यता अस्पतालमा भएको सुधार ले धन्यवादको पत्र बन्दै गएको छ । यति बेला अस्पतालमा ३ जना स्पेस्टलिष्ट डक्टरको उपस्थितिले यहाँका जनतामा खुशियालि छाएको छ । अस्पतालमा ६ महिना यता विभिन्न ३ जना स्पेस्टलिष्ट डक्टर आउदा अस्पतालमा विरामिको चाप बढेको छ ।
स्त्री तथा प्रसुति डक्टर अजेन्द्र यादव
अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति डक्टर डा. अजेन्द्र यादव आउने वित्तिकै अस्पतालमा प्रसुति महिलाहरु को चाप बढदै गएको छ । स्त्री तथा प्रसुति डक्टर नहुँदा यहाँका स्थानिय महिलाहरु लाई रुपन्देहि जिल्लाको भैरहवा र बुटवल जानु पर्ने अवस्था रहेको थियो तर केही महिना अगाडि आएका डाक्टर यादवले अस्पतालमा विश्वसनियता बढे पछि प्रसुति हुने महिलाहरुको अस्पतालमा घुईचो लागेको छ । ६ महिना अगाडि अस्पतामा हप्ता वा महिनाको १÷२ वटा मात्रै प्रसुति हुने गरेको थियो तर अहिले अप्रेसन मार्फत प्रसुति हुने महिलाहरु पनि पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा आउन थालेका छन् । अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार साउन देखि अहिले सम्म ८५७ जान महिलाहरु यहाँ प्रसुति भईसकेको जनाएको छ जस्मा अप्रेसन मार्फत १३० जनाको भएको छ । डेलेभरी समान्य अवस्थामाम नभए पनि अप्रेसन मार्फत गर्ने डाक्टरको अस्पतालले व्यवस्थापन गरे पछि प्रसुतिको संख्या बढेको अस्पताललका प्रबन्धक सुरेन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ । यस्तै अस्पतालमा एम डि.जि.पी एण्ड ईमर्जेन्सी मेडिसिन डाक्टर पवन अग्रहरी पनि अस्पतालमा विरामीलाई सेवा दिन शुरु गरेपछि भिडियो एक्सर गराउनेहरु को भिड लाग्न थालेको छ । भिडियो एक्सरे गराउने पनि दैनिक १० देखि १५ जना आउने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक सुरेन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ ।अस्पतलमा अर्थोपेडिक डक्टर पनि आउने भएको अस्पतालका प्रबन्धक अधिकारीले भन्नु भएको छ । अस्पतालमा हाल स्पेस्टलिष्ट ३ जना सहित ३१ जना जनशक्ति अस्पतालमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
यस्तै अस्पताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो पटक निशुल्क हाईड्रोसिल र पाठेघर खस्ने विरामिहरुको निशुल्क शैल्यक्रिया गर्ने भएको छ । अस्पतालको अथक प्रयासले गर्दा नवलपरासी पश्चिमका ७ वटै स्थानिय तह बाट आउने यस्ता विरामिहरु लाई निशुल्क सेवा दिने भएको छ । प्रदेश नं. ५ र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय संगको समन्वयमा ७५ जना महिलाहरुको पाठेघर खस्ने समस्याको यहि फागुन १९ गते देखि २५ गते सम्म निशुल्क शैल्यक्रिया गर्ने अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेट डा. अनन्त कुमार शर्माले बताउनु भएको छ । त्यस्तै फागुन २६ गते देखि चैत्र २ गते सम्म १२० जनालाई हाईड्रोसिलको निशुल्क शैल्यक्रिया गरीने शर्माले भन्नु भयो ।
Previous Previous post: कुस्तीको प्रथम उपाधि हरीयाणाको अमित पहलवान जिते
Next Next post: नेप्सेमा दोहोरो अंकको पहिरो